res/values-my/strings.xml - platform/packages/providers/DownloadProvider - Git at Google
android / platform / packages / providers / DownloadProvider / refs/heads/android10-mainline-media-release / . / res / values-my / strings.xml
blob: a4cc9f0082ff16f899713caffeddb778d7850c62 [file] [log] [blame]
<string name="app_label" msgid="5264040740662487684">"ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ"</string>
<string name="storage_description" msgid="169690279447532621">"ဒေါင်းလုဒ်များ"</string>
<string name="permlab_downloadManager" msgid="4241473724446132797">"ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာကို သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်"</string>
<string name="permdesc_downloadManager" msgid="5562734314998369030">"အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာကို သုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့် ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်သုံးခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်။ အန္တရာယ် ရှိသော အပလီကေးရှင်းများက ၎င်းကို အသုံးပြုကာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းကို နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ယူနိုင်သည်။"</string>
<string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="2225663947531460795">"အဆင့်မြင့် ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ လုပ်ငန်းများ"</string>
<string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="3902478062563030716">"အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ၏ အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်။ အန္တရာယ် ရှိသော အပလီကေးရှင်းများက ၎င်းကို အသုံးပြုကာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းကို နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ယူနိုင်သည်။"</string>
<string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="2674407390116052956">"ဒေါင်းလုပ်နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းကြားချက် အားလုံးကိုပို့မည်"</string>
<string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="3384693829639860032">"အက်ပ်အား ဒေါင်းလုပ်ပြီးဆုံးပါက အကြောင်းကြားရန် ခွင့်ပြုမည်။ အန္တရာယ် ရှိသော အက်ပ်များက ၎င်းကို အသုံးပြုကာ ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ပြုထားသော အက်ပ်ကို ရောထွေးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။"</string>
<string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="4538031250425141333">"ဒေါင်းလုပ်ယာယီသိမ်းရန်နေရာတွင် ကြိုတင်နေရာယူထားမည်"</string>
<string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3071381088686444674">"အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ထားသောဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာမှ နေရာလွတ်လိုအပ်လျှင်အလိုအလျောက်ဖျက်မရသော ယာယီသိမ်းဆည်းရန်နေရာထဲသို့ ထည့်ရန် ခွင့်ပြုမည်"</string>
<string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="4877101864770265405">"အကြောင်းမကြားပဲ ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်မည်"</string>
<string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="7699189763226483523">"အပလီကေးရှင်းအား အသုံးပြုသူအား မည်သည့်အကြောင်းကြားချက်မျှမပေးပို့ပဲ ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာမှတစ်ဆင့် ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုမည်။"</string>
<string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="8227356876527248611">"စနစ်၏ ဒေါင်းလုပ်အားလုံးကို သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်"</string>
<string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="7541731738152145079">"အပလီကေးရှင်းအား စစ်စတန်ပေါ်ရှိ မည်သည့်အပလီကေးရှင်းမှ ဒေါင်းလုပ်ကိုမဆို ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုသည်"</string>
<string name="download_unknown_title" msgid="1017800350818840396">"အမည်မသိ"</string>
<string name="notification_download_complete" msgid="466652037490092787">"ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီး"</string>
<string name="notification_download_failed" msgid="3932167763860605874">"ဒေါင်းလုပ်မအောင်မြင်ပါ"</string>
<string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="4743443900432303646">"ဒေါင်းလုပ်ပမာဏမှာ ဝိုင်ဖိုင်လိုအပ်သည်"</string>
<string name="notification_paused_in_background" msgid="6393408819031041778">"နောက်ခံတွင် ခဏဆိုင်းထားသည်"</string>
<string name="wifi_required_title" msgid="7266700488421122218">"ဒေါင်းလုပ်မှာ အော်ပရေတာကွန်ယက်အတွက် ကြီးလွန်းသည်"</string>
<string name="wifi_required_body" msgid="4005023496578941958">"ဤ <xliff:g id="SIZE">%1$s </xliff:g> ဒေါင်းလုပ်ကို ပြုလုပ်ရန် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်၊ \_n\_nနောက်တစ်ခါ Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်လျှင် ဒေါင်းလုပ်စတင်ရန် <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%2$s </xliff:g> ကို တို့ထိပါ။"</string>
<string name="wifi_recommended_title" msgid="6488158053932133804">"နောက်မှ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် တန်းစီထားမလား?"</string>
<string name="wifi_recommended_body" msgid="8710820743211704403">"ဤ <xliff:g id="SIZE">%1$s </xliff:g>ဒေါင်းလုပ်ကို စတင်ခြင်းမှာ သင့်ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို တိုစေသည် သို့မဟုတ် သင့်ဒေတာပလန်ပေါ် မူတည်၍ ကျသင့်ငွေ ပိုကုန်စေမည့် မိုဘိုင်းဒေတာ ချိတ်ဆက်မှုကို အလွန်အကျွံ သုံးနိုင်သည်။ \_n\_n နောက်တစ်ခါ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်လျှင် ဒေါင်းလုပ်စတင်ရန် <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%2$s</xliff:g> ကို တို့ထိပါ။"</string>
<string name="button_queue_for_wifi" msgid="6650185573566994738">"တန်းစီရန်"</string>
<string name="button_cancel_download" msgid="4135046775536601831">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="button_start_now" msgid="3817100969365441730">"ယခုအချိန်မှစတင်ပါ"</string>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နေပါသည်</item>
<item quantity="one">ဖိုင် ၁ ခုကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နေပါသည်</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>ဖိုင်များကို စောင့်နေပါသည်</item>
<item quantity="one">ဖိုင် ၁ ခုကို စောင့်နေပါသည်</item>
<string name="download_remaining" msgid="2313089371178695625">"<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g> ကျန်ရှိသည်"</string>
<string name="download_no_application_title" msgid="5780812573953335721">"ဖိုင်အား ဖွင့်မရပါ"</string>
<string name="root_downloads" msgid="8380500940211778491">"ဒေါင်းလုဒ်များ"</string>
<string name="download_queued" msgid="3383844741769045371">"တန်းစီထားပြီး"</string>
<string name="download_running" msgid="774654178925442490">"ပြုလုပ်နေဆဲ"</string>
<string name="download_error" msgid="1857737890005386798">"မအောင်မြင်ပါ"</string>
<string name="download_running_percent" msgid="3492753569359254730">"လုပ်ဆောင်နေဆဲ၊ <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>"</string>